सेलिब्रेटीकी पनि सेलिब्रेटी सुष्मा भन्छिन ‘आफ्नै कमाईमा रमाउदा खुशी लाग्छ’ | newdnn.com
१०,शनिबार १९:४३ Sangita Rai
शहर बजारमा अहिले सबैभन्दा छिटो बिक्ने भनेकै सुन्दरता हो । जो कोहीलाई पनि मन पर्ने सुन्दरताको राज सबैमा हुदैन । तर काठमाडौँ मलको चौथो तलाको फेसियल हाउसमा एउटा यस्तो राज छ, जहाँ नेपालका सबैजसो स्टार सेलिब्रेटी आफुलाई सुन्दर बनाउन पुग्छन । काठमाडौँको धुवाँ धुलोमा स्टार कास्ट मेन्टेन गर्न चुनौति थपिइरहेका बेला फेसियल हाउसकी सञ्चालक सुष्मा महराले सुन्दरता जोगाइराख्ने र थप चम्काउने जिम्मा आफ्नो काधँमा बोकेकी छन । सुपरस्टार नायिका रेखा थापादेखि सदाबहार नायक भुवन केसीसम्मको सुन्दरता जोगाउन अरोरात्र खट्ने गरेकी सुष्मालाई हिजोआज सेलिब्रेटीकी पनि सेलिब्रेटी भन्ने गरिन्छ । खासगरी सेलिब्रेटीहरुको व्यक्तित्व र सुन्दरता जोगाई दिने सुष्माको वास्तविक जीवन यो पेशामा कत्तिको संघर्षशिल अनि चुनौतिपूर्ण छ त ? भनेर हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
 सेलिब्रेटीको पनि सेलिब्रेटी बन्न कत्तिको चुनौति छ ?
एकदमै चुनौति छ । सायद सोचेभन्दा पनि धेरै । एउटा कलाकारको कला, अभिनय, गीत अनि नृत्य हेर्न जति दर्शक भीड लाग्छन । त्यो उसको कलामा मात्रै होइन, उसको व्यक्तित्व अनि सुन्दरतामा पनि भर पर्छ । एउटा सानो कमीकमजोरी मात्रै देखियो भनेपनि त्यो कलाकारलाई हेर्ने दर्शकको दृष्टिकोण परिवर्तन भई दिन सक्छ । त्यसैले सेलिब्रेटीलाई वास्तविक सबैको सेलिब्रेटी बनाउन धेरै नै चुनौति छ । यो कुनै कोर्स पढेर भन्दा पनि अवस्था, उसको क्षमता, बडी अनि हेयर स्टाइल हेरेर नयाँ नयाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 शुरुका दिनमा स्थापित हुन के कस्तो समस्या झेल्नुपर्यो ?
शुरुमा त समस्या भयो । आर्थिक भन्दा पनि सामाजिक र पारिवारिक । श्रीमानले पुरा सहयोग गरेपनि घरका केही सदस्यले यो क्षेत्र मन नपराउने भएकाले उहाँहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न समय लाग्यो । तर पछि विस्तारै सबै बुझ्दै गएपछि सहज हुदै गयो । अहिले पनि व्युटिसियन भन्दा धेरैले जिब्रो टोक्ने गर्छन । काठमाडौँमा नहोला तर भ्याली बाहिरका केही ठाउँमा अझै यस्तो अवस्था छ । मैले वि.स. २०५५ सालमा यो काम शुरु गर्दा अहिलेसम्म रोकिनुपरेको छैन ।
 दिनमा कतिजना कस्ता–कस्ता सेलिब्रेटी आउनुहुन्छ ?
दिनमा कम्तीमा पनि दुई तिन जना स्टार सेलिब्रेटी आइरहनु हुन्छ । सेलिब्रेटी नआएको दिन हुदैन । यो फेसियल हाउसमा सुपरस्टार नायक भुवन केसीदेखि नायिका रेखा थापा, झरना थापा, गायिका आस्था राउत, इन्दिरा जोशी, मोडल शंकर बिसी, पार्वती राई, ज्योती मगर लगायत प्राय सबै जना आउनुहुन्छ । हाम्रो यहाँ आउने कलाकार सायदै अरु फेसियल हाउसमा जानुहुन्छ होला । किनकी हामीकहाँ अरुको भन्दा फरक, सेलिब्रेटीको सम्पूर्ण व्यक्तित्व र स्किन नेचर हेरेर फेसियल हुन्छ । त्यसैले पनि अन्य प्रतिष्पर्धामा अगाडी छौँ ।
 प्राय कस्तो लुक्स चाहन्छन, सेलिब्रेटीहरुले ?
उनीहरु अन्तराष्ट्रिय तर मोडर्न लुक्स चाहिरहेका छन । अन्तराष्ट्रिय सेलिब्रेटीहरुको लुक्स आफुमा देख्न चाहन्छन । अनि फिल्म, भिडियो सुटिङका लागि पनि हामीले स्पट प्रोजेक्ट फेसियलको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यतिमात्रै होइन, विवाह, पार्टी, सुटिङका लागि पनि हामीले स्टाफहरु खटाउने गरेका छौँ । अहिलेका आधुनिक क्लाइन्टहरुले खोजेको सेवा घरमै गएर पनि दिने गरेका छौँ ।
 फेसियल हाउसबाट यहाँसम्म आउदाँ कत्तिको सन्तुष्ट र खुशी हुनुहुन्छ ?
खुशी छु । सन्तुष्ट पनि छु । शुरुमा बुटिकबाट शुरु गरेको यो क्षेत्र अहिले काठमाडौँकै विभिन्न ठाउँ र पोखरासम्म शाखा खोलिसकेकी छु । केही ठाउँमा चाडैँ नै शाखा उद्घाटन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ । काम गर्ने टिम र घरको सहयोगको कमी नभएकाले पनि आफ्नै कमाईमा रमाउन पाउँदा खुशी छु । आशा छ, यो खुशी अन्य ठाउँमा शाखा विस्तार गरेपछि थप बढ्नेछ । यसको श्रेय मलाई यहाँसम्म आइपुग्न सहयोग गर्ने सबैलाई पनि दिन चाहन्छु ।